Hery Rajaonarimampianina any Abidjan : Nijery ny fampivoarana ny ara-toekarena -
AccueilRaharaham-pirenenaHery Rajaonarimampianina any Abidjan : Nijery ny fampivoarana ny ara-toekarena
21/07/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Mitondra kaskety roa ny filoha Hery Rajaonarimampianina amin’ny diany any Abidjan Côte d’ Ivoire, satria dia sady filohan’ny vondrona iraisam-pirenena ny frankofonia no filoham-pirenena Malagasy ihany koa izy. Noho izany dia feno ny fandaharam-potoanan’ny filoha Hery Rajaonarimampianina satria hiatrika fihaonana ara toe-karena maro ny tenany, mandritra io diany io. Anisan’ ny goavana indrindra amin’izany izao ny fihaonany amin’ny filoha ivoarianina Alassane Ouattara anio, hibahana ihany koa ny fihaonana maro samy hafa momba ny raharaha ara toe-karena izay haharitra hatramin’ny alahady.
Raha ny ho an’ny rahampitso fotsiny izao, dia misa efatra ny fihaonana goavana hatrehin’ny filoham-pirenena Malagasy, izay hanomboka amin’ny fihaonana amin’ny fivondronamben’ ny orinasa ivoarianina izay hotanterahina ao amin’ny foiben’izy ireo ao Abidjan ihany. Ankoatra izay dia efa nanomana fihaonana amin’ ireo mpiara-miombon’antoka sy tompona orinasa efa voafantina ny kaonsily malagasy any an-toerana. Eo amin’izay sehatra izay ihany, omaly hariva no nisy ny fihaonana tamin’ny tale jeneralin’ ny Afric rice, izay nitohy tamin’ny fivoriana niaraka tamin’i Christine Saint Pierre, minisitry ny fiaraha-miombon’ antoka iraisam-pirenena sy ny frankofonia ao Québec, Canada.
Ny sabotsy kosa hanombohana io tontolo andro io, dia hisy ny fihaonan’ny Filoha malagasy amin’ny Filohan’ny banky afrikanina ho an’ny fampandrosoana Akinwumy Adesina. Ny BAD rahateo amin’ izao fotoana dia anisan’ny mpanohana goavana ny firenena malagasy, amin’ ny alalan’ ireo tetikasa maro toy ny bas Mangoky izay mitondra rivo-baovao ho an’iny faritra Atsimon’ny Nosy iny . Ary araka ny efa fanaon’ny filoha Hery Rajaonarimampianina amin’ny diany tahaka izao, dia tsy hadinoiny velively ny mihaona amin’ ireo diaspora any an-toerana ny harivan’io sabotsy io. Raha ny isan’ ireo diaspora malagasy any Abidjan amin’ izao fotoana dia eo amin’ny 300 eo, ary 500 kosa raha manerana an’ i Côte d’ Ivoire iray manontolo.